Thenga i-Bitcoin nge Udluliselwano lwe-IMPS | Paxful
Thenga i-Bitcoin (BTC) ngexabiso eliphantsi kunokwenzeka nokuba uphi na. I-Paxful isebenza kumgaqo-mali wo-ntanga-ku-ntanga okuvumela ukuba uthenge i-BTC kunye ne-10 USD encinci. Unokuthenga ngokuthe ngqo kubantu abafana nawe-ngaphandle kweebhanki okanye iinkampani.
Inxalenye engcono? Akukho ntlawulo xa uthenga i-Bitcoin kwi-Paxful. Oko kuthetha ukuba ufumana i-crypto eninzi ngemali yakho. Enkosi malunga neendlela zokuhlawula ezingama-400 ezifumanekayo eqongeni, ungajika imali yakho ibe yiBitcoin ngezipaji ze-intanethi okanye ukudluliselwa kwebhanki. Unokurhweba nezinye ii-cryptocurrencies njenge-Ethereum yeBitcoin, okanye uthengise amakhadi esipho ukuze ufumane amaqhezu e-BTC ngembuyekezo.
I-Paxful ikhuselwe ngokhuseleko olukwinqanaba le-vault kwaye ilawulwa e-United States njengeShishini leeNkonzo zeMali. Indawo yokuthengisa ibekwe esweni ngokungqongqo ngumkhosi wethu wabahlalutyi kwaye abasebenzisi baqinisekisiwe ukuqinisekisa indawo yokuthengisa ekhuselekileyo. Ngawo onke la manyathelo okhuseleko ekhona, ungaphumla ngokulula ukwazi ukuba ulwazi lwakho kunye ne-crypto zikhuselekile kuthi.
Nantsi indlela ongaqala ngayo ukuthenga iBitcoin kwiPaxful:
Bhalisela i-akhawunti ye-Paxful -Yenza kwaye uqinisekise i-akhawunti yakho ukuze ufumane isipaji sakho seBitcoin sasimahla ngokhuseleko lwe2FA. Ukuseta iakhawunti yakho kulula kwaye kunokwenziwa ngemizuzu. Into oyifunayo yidilesi ye-imeyile esebenzayo, inombolo yefowuni, kunye ne-ID ukuze uqalise.
Fumana umthengisi - Cofa Thenga kwimenyu ephambili kwaye ukhethe Thenga i-Bitcoin. Seta imali ofuna ukuyisebenzisa, imali oyikhethayo, kunye nendlela yokuhlawula oyikhethileyo kwiwijethi yebar esecaleni ukuze ufumane abathengisi basekhaya nabamanye amazwe abahambelana neemfuno zakho.
Sicdbisa ukuhluza kuzo zonke Iintlobo zoMsebenzisi (uMthunywa, uMnxulumanisi, njalo njalo) ukubonisa abathengisi abathembekileyo abaye bajongana nenqanaba elongezelelweyo lokhuseleko oluvela kuPaxful.
Funda iimfuno - Cofa kwi Thenga iqhosha ukujonga imigaqo yomthengisi. Ngokuxhomekeke kwindlela yokuhlawula, abathengisi banokukucela ukuba ukhuphe umfanekiso wemali kwi-wallet yakho ye-intanethi, ifoto yesiliphu sediphozithi yebhanki, okanye ikopi yerisithi yekhadi lesipho olithengileyo. Abanye abathengisi banokukucela ukuba uthumele i-selfie ephethe isazisi esisebenzayo ngeenjongo ezongezelelweyo zokhuseleko.
Qala urhwebo - Ukuba unokuthobela imimiselo yomthengisi, setha inani leBitcoin ofuna ukuyithenga kwiwijethi uze ucofe Thenga ngokuukuqala urhwebo. Oku kuya kuvula incoko ephilayo kunye nomthengisi apho uya kufumana imiyalelo engaphezulu malunga nendlela yokugqiba urhwebo. Incoko ebukhoma irekhoda yonke imiyalezo kwaye iya kukukhusela ukuba udibana nazo naziphi na iingxaki, ke nceda unganxibelelani ngaphandle kwePaxful.
Thumela intlawulo kwaye ufumane i-BTC yakho - Emva kokuba zonke iimfuno zizalisekile kwaye umthengisi unika uphawu lokuhamba, dlulisela intlawulo kwaye ucofe Ihlawulwe ngokukhawuleza. Ngeli xesha, i-BTC yomthengisi ivaliwe kwi-escrow ukukhusela iqabane lakho lezorhwebo ekwamkeleni intlawulo yakho kwaye lingayikhuphi i-crypto. Ngokukhawuleza wakuba umthengisi eqinisekise intlawulo yakho, i-Bitcoin iya kukhululwa kwi-escrow kwaye idluliselwe kwi-Sipaji se-Paxful sakho.
Konke okuseleyo kukunika umthengisi uphononongo lwamava akho kwaye yiloo nto! Ukufumana ulwazi oluthe kratya, unokubukela yethu eneenkcukacha uhambo lwevidiyo malunga nendlela yokuthenga i-Bitcoin kwi-Paxful.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ucofe kwi icon yengxoxo kwikona esezantsi ekunene kwiphepha ukuze uqhagamshelane neqela lethu lenkxaso. Silapha ngenxa yakho 24/7-nangeeholide!
Ukuthenga i-Bitcoin kwi-Paxful kukhuselekile kwaye kulula, kodwa ungathathi ilizwi lethu ngayo—funda ugxeko ncomo lwabasebenzisi abaninzi bePaxful kwihlabathi jikelele.